Three Lives Three Worlds , Ten Miles of Peach Blossoms ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Episode 50 (Openload Link )Episode 51 ( Openload Link )
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ မထွက်ခင်တည်းက နာမည်လေးမြင်ပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုပေါ့ ... တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပြန်နေကြဖြစ်တဲ့ အစ်မ Hsu Min Min Hlaing က လဲ သူ့ကား Novoland : The Castle in the Sky လေးပြီးလို့ နောက်တစ်ကား ဘာပြန်ရမလဲမသိပဲ ဒွိဟဖြစ်နေချိန် ဒီကားလေး ထွက်လာလို့ ... မရ ရအောင် အပူကပ် မဲဆွယ်ပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းဖြစ်လိုက်ပါတယ် ... အခုချိန်မှာတော့ မြန်မာစာတန်းထိုး လေးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ...
ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ '' Three Lives Three World, Ten Miles of Peach Blossoms '' ဖြစ်ပါတယ် ... Drama , Romance , Fantasy & Wuxia အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အပိုင်းရေ စုစုပေါင်း ၅၈ ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ပိုင်ချင်းကအဆင့်မြင့်နတ်ဘုရားမဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်
ဘုံဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲကတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချင်ချိုရဲ့လက်ရှိအမျိုးသမီးဧကရာဇ်လဲဖြစ်တယ် ... ပိုင်ချင်း က ခွန်လွန်တောင်ရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ပြီး အသူရာသခင် ကို ဆန့်ကျင်တဲ့တိုက်ပွဲမှာသေမျိုးနယ်ပယ်ထဲကျရောက်သွားတယ် ...
သူမရဲ့နတ်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုလျစ်လျူရှုပြီး သေမျိုးနယ်ပယ်ထဲမှာ စုစု အဖြစ်နေထိုင်တယ် ... နတ်မျိုးနွယ်တွေမလုပ်ရမယ့်အရာတခုဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကိုးထပ် က နန်းတက်မင်းသား ရန်ဟွား နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ် ... စုကျင်း ဟာ ရန်ဟွားရဲ့ ပိုင်ချင်း အပေါ်
ထားတဲ့အချစ်ကို မနာလိုဖြစ်ပြီးသူတို့ကြားနားလည်မှုလွဲအောင်ဖန်တီးခဲ့တယ် ပိုင်ချင်းကသူမအချစ်ကို ဆုံးရှုံးရတယ် ထင်ပြီးသူမရဲ့သေမျိုးဘဝကို အဆုံးသတ်ပြီးမှတ်ဥာဏ်တွေဖျက်ဆီးခဲ့တယ် ...
ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ cast တွေကတော့ main cast အနေဖြင့် မင်းသား Mark Chao နှင့် မင်းသမီး Yang Mi တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ... January 30 , 2017 မှာ စတင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ် ... Ongoing series တစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး ... ပရိသတ်ကြီး ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Translator - Hsu Min Min Hlaing
Episode 21 ( pcloud Link )
Episode 30 ( pcloud Link )
Episode 31 ( pcloud Link )
Episode 32 ( pcloud Link )
Episode 33 ( pcloud Link )
Episode 34 ( pcloud Link )
Episode 35 ( pcloud Link )
Episode 36 ( pcloud Link )
Episode 37 ( pcloud Link )
Episode 38 ( pcloud Link )
Episode 39 ( pcloud Link )
Episode 40 ( pcloud Link )
Episode 41 ( Openload Link )
Episode 41 ( pcloud Link )
Episode 42 ( Openload Link )
Episode 42 ( pcloud Link )
Episode 43 ( Openload Link )
Episode 43 ( pCloud Link )
Episode 44 ( Openload Link )
Episode 44 ( pcloud Link )
Episode 45 ( Openload Link )
Episode 45 ( pcloud Link )
Episode 46 ( Openload Link )
Episode 47 (Openload Link )
Episode 48 (Openload Link )
Episode 49 (Openload Link )
Episode 50 (Openload Link )
Episode 51 ( Openload Link )
Episode 52 ( Openload Link )
Episode 53 ( Openload Link )
Episode 54 ( Openload Link )
Episode 55 ( Openload Link )
Episode 56 ( Openload Link )
Episode 57 ( Openload Link )
Episode 58 Final ( Openload Link )
China Drama Fantasy Romance Wuxia
Labels: China Drama Fantasy Romance Wuxia
myomyo February 12, 2017 at 1:03 AM
pls keep upload . many thanks
TYMMtv.com March 2, 2017 at 5:47 PM
Aung MyatSoe March 4, 2017 at 5:27 AM
aye thitsar March 7, 2017 at 7:39 PM
I'm waiting for new episode
Sai htun htun min min March 13, 2017 at 11:01 PM
waiting for ur upload
myomyo March 16, 2017 at 1:44 AM
pls upload the rest
Sai Marn Hein March 16, 2017 at 3:29 AM
Nice movie,waiting for new episodes
Zar chi March 20, 2017 at 12:49 AM
Thanks !! R bwar
okkala net March 26, 2017 at 2:32 AM
အပိုင်း 21 တင်ပေးပါဦး
TYMMtv.com April 7, 2017 at 9:43 AM
Pcloud links please 26,27,28,29,30
သံစဉ်​ကမ္ဘာထဲက ​နှောင်​ကြိုး April 9, 2017 at 1:43 PM
သံစဉ်​ကမ္ဘာထဲက ​နှောင်​ကြိုး April 9, 2017 at 1:44 PM
okkala net April 11, 2017 at 8:58 PM
Thz နောက်ထပ်အပိုင်းတွေ လုပ်ပါဦး မြန်ြ့မန်ကြည့်ချင်နေပြီ
Sai htun htun min min April 15, 2017 at 7:43 PM
aye thitsar April 19, 2017 at 7:22 AM
okkala net April 28, 2017 at 8:48 PM
အပိုင်း 36 နောက်ပိုင်းတွေ တင်ပေးပါဦး အပြင်မှာ ခွေတွေထွက်နေတာ အားမပေးပဲ ဆိုက်က တင်တာကို ကြည့်ချင်တာ ဘာသာပြန်တွေကို ချစ်လို့
okkala net May 5, 2017 at 1:56 AM
အပိုင်း ၄၀ နောက်တွေ တင်ပေးပါဦး ကြည့်ချင်လို့ မြန်မြန်လေး
okkala net May 5, 2017 at 1:57 AM
အပိုင်း ၄၁ နောက်ပိုင်းနော်
okkala net May 5, 2017 at 8:42 PM
myomyo May 8, 2017 at 7:45 AM
waiting for it . tq
အပိုင်း 20 က openload နဲ့download လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် download လုပ်ပြီးသူများရှိရင် Share ပေးကြပါအုံး
saionmurngangkhur May 25, 2017 at 12:28 AM
အပိုင်း 20 က openload နဲ့download လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် download လုပ်ပြီးသူများရှိရင် Share ပေးကြပါအုံး pcloud link 2ခြုေ်နေတယ်
okkala net June 5, 2017 at 5:34 AM
အပိုင်း 51 နောက်ပိုင်းတင်ပေးပါဦး
NN August 10, 2017 at 12:48 AM
51 to 58 please
Myo Myo August 13, 2017 at 2:24 AM
can't download ep 1,2,3, 20,29 and from 51 to 58. please upload these episodes again.
Dr. Zwe August 31, 2017 at 3:58 AM
Please upload 51 to end
Mr. Han Zaw September 1, 2017 at 1:30 AM
Please help me. from 51 to 58